Shariif Xasan oo cadaadis xoog leh ku haya guddiga doorashooyinka KGS
30 October, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulan qarsoodi ahaa oo Baydhabo ku dhexmaray Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee Koofur Galbeed iyo xubnaha ugu muhiimsan ee Guddiga doorashada Koofur Galbeed, kuwaasoo la soo magacaabay 21kii Bishan.
Shariifka oo dalbaday kulankan, waxaa kaalin ka qaatay isku imaatinka Gudoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed C/Qaadir Shariif Sheekhunaa Maye oo laftiisa hardan ugu jira inuu dib ugu soo laabto kursiga Doorashada Madaxweynaha kadib.
Shariifka ayaa guddigan u sameeyay balanqaadyo isugu jirta lacago iyo xilal, taasoo ay aqbaleen inta badan xubnihii kulanka fadhiyay, waloow qaarkood ay shaki geliyeen dhaqan galka balanta Shariifka, iyagoo soo xasuusiyay balamo hore oo uu u dhigay taasoo aan meel laga soo qaadin.
Qorshe ka kooban ilaa iyo 5 Qodob ayuu miiska soo saaray Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana ugu muhiimsan in tartanka doorashada laga hor istaago inta badan raga ugu cad-cad tartanka dhacaya bisha danbe.
Shariifka, ayaa Guddiga doorashada u soo jeediyay iney dib u dhigaan waqtiga doorashada ilaa iyo bilowga Sanada cusub ee 2018, Guddiga ayuu u sheegay in malamahan aan sameyn wax qaban qaabo doorasho ah, Balse diyaar garowgooda ay bilaabaan oo kaliya Bisha December ee sanadan.
Guddiga ayaa u muuqda iney hada qaateen qoodbkaas, maadaama aaney jirin wax dhaq dhaqaaqyo ah oo ay sameeyeen tan iyo markii la magacaabay guddigan.
Shariifka, ayaa sidoo kale doonaya in doorashada lagu qbato Gudaha Xarunta Madaxtooyada ee Baydhabo, maadaama dhaq dhaqaaqeeda uu xadidi karo, wax kastana ay ugu dhici karaan sida uu isaga daneynayo.
Waxaa kaloo jiri qorshe dhinacyo badan leh oo uu Ku doonayo inuu doorashada kaga hor istaago Musharixiinta beesha Digil ah, Gudoomiye Maye, ayuu u soo jeediyay in guddiga aysan ku soo darin dadka tartamaya maadaama isaga oo digil ah uu ku fadhiyo Kursiga Gudoomiyaha baarlamaanka.
Hadey taasi dhacdo, waxaan tartameynin Taliyihii hore ee Nabad Sugida Somaliya Xuseen Cismaan Xuseen iyo musharaxa kale ee Xasan Macalin.
Amarrada uu siiyay Madaxweyne Shariif Xasan guddiga doorashada, ayaa waxaa kamid ah in doorashada ka hor istaagaan inuu tartamo qof ka soo mid noqday urur diimeedyadii dalka ka jiray, Qodobaaksna waxa uu qabanayaa Mukhtaar Rooboow (Abuu Mansuur)
Shariifka ayaa durba dayactir iyo qlaabeyn ku bilaabay Dhismaha Xarunta Wasaarada Qorsheynta ee Maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo uu doonayo iney ka dhacdo doorahada, Xaruntan waxey ku dhex taalaa Madaxtooyada Baydhabo.
Guddiga doorashada, ayaa indhaha uun ka daawanaya tilaabooyinka uu qaadayo Madaxweynaha Sharaxan, Iyadoo qaarkood ay inoo sheegeen iney dareemayaan cabsi la xiriirta in la dhibaateeyo hadii ay si cad isaga diidaan fariimaha ka soo yeeraya Shariifka.